ကမ္ဘာ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နေ့ အကြို ပလတ်စတစ် ကင်းစင်ရေး လှုပ်ရှားမှု မန္တလေးမြို့ ဦးပိန်တံတားနှ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇွန် ၃
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ် တောင်သမန်းအင်း ဦးပိန်းတံတားနှင့်မယ်ဖယ်တန်းတွင် ဇွန် ၂ ရက် နံနက် ၇ နာရီက Clean Mandalay နှင့် Trash Hero Mandalay တို့ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ အကြိုပလတ်စတစ်ကင်းစင်ရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”လူတွေအမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်တတ်အောင်အသိပညာ ပေးဖို့ အခုလိုအမှိုက်ကောက်တာပါ။ အခုလိုအမှိုက်ကောက်နေတာကို တစ်ယောက်ပဲသိသွားသည်ဖြစ် စေ၊ နှစ်ယောက်ပဲသိသွားသည် ဖြစ်စေ၊ သိသလောက်ရသွားတာကို အကျိုးအမြတ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် တဖြည်းဖြည်းလူတွေပိုသိလာသလို ပိုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီကလည်း အမှိုက်ကားတွေ လိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးပါတယ်”ဟု Clean Mandalay မှဦးဆောင်သူဦးသန့်ဇော်ကပြောသည်။ လူတိုင်းစည်းကမ်းရှိရန်၊ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ပစ်ခြင်းမပြုရန်၊ ပြည်သူတွေအနေဖြင့် တစ်ဦးတစ် ယောက်ချင်းအမှိုက်များကို အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ပစ်ပေးခြင်းဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းပါဝင် စေလိုကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်သန့်ရှင်းစေလိုသူတချို့ကဆိုသည်။
”အမျိုးသားမှ အမျိုးသမီးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူတွေကအမှိုက် ကိုလက်ထဲကြာကြာမကိုင်ထားချင်ကြဘူး။ ဒီနေ့ဦးပိန်တံတား အမှိုက်ကောက်တာလေ့လာမိသ လောက် တံတားပေါ်မှာအမှိုက်ပုံးလုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့ တွေ့ တဲ့နေရာ စွန့်ပစ်ကြတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒီအချက်ကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားစေချင်တယ်။ လူတိုင်းအမှိုက်ကိုစည်းကမ်းမဲ့မစွန့်ပစ်ဘဲ စနစ်တကျစွန့်ပစ်စေချင်တယ်။ ပြည်သူနဲ့အစိုးရပူးပေါင်းမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပမှာပါ” ဟု အမှိုက်ကောက်ရာတွင်ပါဝင်သူ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် မမိုးမိုးမြတ်ကပြောသည်။ Clean Mandalay သည် မန္တ လေးမြို့ရှိ အထင်ကရနေရာများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များပြားစွာလာရောက်သော နေရာများတွင် ပလတ်စတစ်ကင်း စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အပတ်စဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဂီတလောကတွင်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများ ရှိနေဟု ကတ်သီဒန်းနစ်ပြော
ကလေးနှင့် ချင်းတောင်ဒေသ၌ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ကျဆင်းနေမှုကြောင့် သဲကျောက် အရောင်းအဝယ် ပါး?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေကို နှစ်နှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း
Re-export သကြား တင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်း၌ ရောင်းချနေသည့်ကုမ္ပဏီများကို အရေးယူသွားမည်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နည်းပြ ကိုဗက်ရဲ့ ဖိအားတွေကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျာမန် ပိုကယ်ဖလားအောင်မြ
ဥရုချောင်းနှင့် ချောင်းလက်တက်များတွင် တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှု များပြားနေသည့်အတွက် ချင်းတွင?